UMarco Ferrari - Buyela Komsuka Wokholo - Ukubalwa KweMbuso
Ntokazi yethu	UMarco Ferrari ngo-Agasti 23, 2020 eParatico (Brescia, Italy)
Bantwana bami abathandekayo nabathandekayo, ngiza phakathi kwenu ukuninxusa futhi ukuba nibuyele kuNkulunkulu!
Bantwana abathandekayo, ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayenqaba uthando olungenamkhawulo lweNdodana yami, abaningi bahlala kude noNkulunkulu, futhi izwe likuphazamisa ngisho naseZwini Lakhe, eVangelini Lakhe.
Bantwana abathandekayo, buyelani kuNkulunkulu, buyelani ekuphileni ngokwemiyalo Yakhe, buyelani ethembeni leZwi lakhe okuyindlela, iqiniso nokuphila. Bantwana abathandekayo, ngiyaninxusa emthandazweni, ekuphendukeni nasemhlatshelweni, ngiyaninxusa ukuba nithande wonke umuntu futhi nibe nesihe.
Ngicela Amadodana Ami [Abapristi] - yebo, ngicela iBandla eliNgcwele leNdodana Yami - libuyele emsukeni wokholo futhi balwe, kulezi zikhathi zobumnyama lapho omubi ehlwanyela ububi nenzondo ezinhliziyweni, izikhali ezinamandla kakhulu zomkhuleko, zokuzisola nokuzisiza.
Nginawe, bantwana abathandekayo, nginani futhi ngizohlala nani! Nginibusisa nonke enikhona lapha ngenhliziyo yami, ikakhulukazi labo abahlupheka emzimbeni nasemoyeni. Nginibusise nonke egameni likaNkulunkulu onguYise, egameni likaNkulunkulu onguNdodana, egameni likaNkulunkulu onguMoya Wothando. Amen.
Zingane zami, ekubuyeni emakhaya enu, thathani umyalezo wami, thatha ukumamatheka kwami ​​nesibusiso sami kubo bonke abakulindile. Sanibonani zingane zami.
← UPedro Regis - Uthembekile futhi…
Luz de Maria - Ubuntu… →